Home News Wadooyinkii Lagu Furay Amarka Madaxweynaha oo Dib loo xiray iyo Ciidamo...
Wadooyinkii Lagu Furay Amarka Madaxweynaha oo Dib loo xiray iyo Ciidamo Si gaar ah uga Amar-qaata Kheeyre
waxaa la xirey wadooyin dhowr ah oo ku yaala magaalada muqdisho iyadoo aan waxba laga soo qaadan hadalkii madaxweyne Farmaajo ee ahaa in aan wado la xiri karin.
Wararka ayaa sheegaya iney wadooyinkaasi xireen ciidamo ka amar qaata Raiisul Wasaare Kheyre lamana oga sababta.
Dhinaca kale waxaa socda wadahadalo Madaxweynuhu la leeyahay qaar ka mid ah duqowda dhaqanka Muqdisho.
Wararku waxay tibaaxayaan inuu jiro khilaaf u dhexeeya Madaxweynaha iyo Raiisul Wasaarihiisa.
So kastaba Magaaladu waa ay foolaneysaa ee Alahayoow sidii roon,Guusha shacabka iyo Magaalada ayaa aad u kacsan
Previous articleKheeyre oo Xaqiiqsaday in uu kasoo Dhamaaday Dhanka Madaxweyne Farmaajo Waxuuna u Ololeeynayaa Wasiir Islaaw si R/wasaare Looga dhigo
Next articleGudigga Difaaca Baarlamaanka oo ka shiraya Dayacaada Amnigga Caasimada iyo Xildhibaanadda oo Go’aan Culus qaadanaya!!
Wararkii ugu dambeeyay Howlgalo laga sameeyay gobolka Sh-hoose (yaa lagusoo qabtay)